Article ihlose ukunikeza nolwazi oluyisisekelo lokuthi lokho emzuliswaneni robin, okuyizinkinga ezivamile kunoma ulimi lokwakha izinhlelo kanye uMklami ukuqeqeshwa ezingeni.
Algorithm ukulandelana yezenzo ukufeza isixazululo kwenye ikhompyutha noma enye inkinga e inombolo ezilinganiselwe izinyathelo. Izenzo (imiyalo) ngokuba ukuqaliswa algorithm angasayindwa enye ngemva kwenye (ngokulandelana) ngesikhathi esifanayo (ngokulinganisa) noma nganoma yikuphi ukuhleleka, ngokusebenzisa amaluphu nemibandela inguquko. Algorithms azisetshenziselwa izinhlelo, kodwa nakwezinye izindawo, ngokwesibonelo e-ukuphathwa zokukhiqiza kanye ibhizinisi izinqubo.
I-algorithm libizwa eyindilinga uma kunezenzo noma amaqoqo izenzo okumele kwenziwe ngaphezu kwesikhathi esisodwa. izenzo okuphindayo algorithmic iluphu umzimba. Ngaphezu kwalokho, umjikelezo ngamunye has a isimo ukwenza eyindilinga algorithm kuphelile.
Izinhlobo algorithm eyindilinga
Ngamunye round robin sihlanganisa isimo iluphu, isb. E. Inkulumo okunengqondo ukuthi ichaza isheke oyokwenziwa umzimba iluphu futhi, noma umjikelezo kuqedile. Ngokusho indlela ngokuphatha bonke algorithm eyindilinga zihlukaniswe amaqembu amathathu.
Cycle nge umbandela
Ngo-algorithm ezifana isimo isandiso eyindilinga iyenziwa phambi ukucutshungulwa umzimba iluphu, isb. E. khona isidingo ukuphindaphinda processing umjikelezo.
Cabanga izinombolo ukuphrinta -5-0 njengesibonelo eyindilinga algorithm umbandela:
Sigxilisa ukubaluleka kokuqala j base variable, ilingana -5.
Thina hlola isimo loop. Isimo uthambekele kokuhle, futhi umzimba uyabulawa okokuqala.
Ngaphezu kwalokho ukungezwa variable j iyunithi futhi uhlole isimo loop.
Umjikelezo siyaqhubeka kwenziwe kuze ukubaluleka j kuncane noma ilingane no-zero, kungenjalo uphume umjikelezo we FALSE legatsha
Cycle nge postcondition
ukuhlolwa okunemibandela wenziwa emva umjikelezo yokwelapha yokuqala, umzimba futhi ilawula okukhiphayo kuwo.
Ake ukubala isamba kusuka 1 kuya isibalo n njengesibonelo algorithm eyindilinga asebenzisa postcondition:
Thina ukwethula ezilinganiselwe inombolo n sibalo isamba bese usetha zero ukubaluleka kokuqala isamba semali isamba kanye umjikelezo esiphikisayo i.
Lo mjikelezo uyabulawa ngaphambi izimo ekuhlolweni kokuqala.
Hlola isimo umjikelezo, r. E. Inani esiphikisayo i kuncane noma elilingana n.
Uma imigomo umphumela omuhle, siba ukuhlela futhi, noma uqedele umjikelezo kanye Imiphumela isamba isibonisi noma ukuphrinta.
Ngokuvamile esetshenziswa ubuchule, lapho inombolo oyifunayo iluphu okushiwoyo is kusengaphambili eyaziwa, futhi ngokuvamile sisetshenziswa uma usebenza nge afanayo.
Lokhu algorithm yakhiwa izingxenye ezintathu saziso:
Inani isiqalo, okuthiwa ipharamitha umjikelezo, t. K. Le variable beshintsha ngemva umjikelezo ukubulawa ngamunye, futhi inquma isikhathi ngemva kokuqedwa kwalo.
Inani lapho iluphu evala.
Ngezinye iphuzu ngalinye, uhlelo ihlola ukubona uma ukubaluleka kokuqala idlula sokugcina. Futhi uma kunjalo, khona-ke umjikelezo usuphothuliwe. Uma kungenjalo, khona-ke inani yengezwe kokuqala isinyathelo usayizi kanye eziphindaphindiwe umjikelezo. Of inothi Ikakhulukazi wukuthi iyiphi iluphu olungenamkhawulo kungenziwa esikhundleni ngaphambi okunemibandela noma postcondition.
Ekubhaleni round robin kuyadingeka ukuba banamathele izimo ezimbili saziso. Eyokuqala ukuqeda umjikelezo, kubalulekile ukuthi okuqukethwe umzimba okuthunyelwe abathintekayo noma umbandela, kungenjalo thina ekugcineni ungathola an loop elingapheli. Kodwa kwabanye imijikelezo ezinjalo kusetshenziswa izicelo software. Njengoba isibonelo algorithm eyindilinga ukuthi ukusebenzisa unomphela, wena kungabangela ohlelweni lwe-Windows ezisebenza, esebenzisa i engapheli iluphu yokuvota igundane ukucacisa izenzo yomsebenzisi. Okwesibili, eziguquguqukayo wadlulela umjikelezo kufanele ahlinzeke okungenani oyedwa ngokubulawa kwakhe.
Ukubala we ngokwesimo
Ukuhlanganisa ukufundwa uyonika isibonelo algorithm eyindilinga ukubala ifakthoriyali yinombolo. Lokhu isibonelo umjikelezo ne umbandela kodwa ezingase zithathwe yibo yiluphi uhlobo round robin.
Baseline idatha: idatha - inenombolo, okuyinto kunqunywa ngokuba ngokwesimo.
Eziguquguqukayo System: Cycle ipharamitha i, okuyinto ethatha amanani asuka 1 uzoshiya idatha c 1.
Umphumela: variable ngokwesimo - idatha ngokwesimo, okuyinto umkhiqizo integers kusuka 1 kuya idatha.
Cabanga ngesinyathelo algorithm ngesinyathelo:
I-algorithm lithole inombolo idatha, ofuna ukubala ngokwesimo.
Of variable ngokwesimo, okuyinto izogcina umphumela wokugcina, isethelwe ubunye.
Sihlela umjikelezo ipharamitha i futhi ukubaluleka kokuqala 1. Inani lokugcina kuyoba idatha inombolo yokuqala. Uma ukubaluleka counter i mkhulu, loop evala.
Loop ukubala wenziwa ngokwesimo - ngokwesimo anamuhla ziziningi futhi counter i.
Ngokufaka esinye nenani esiphikisayo, isimo isheke iluphu, futhi uma umphumela omuhle, waliqeda.
Emva kokuqeda i-umjikelezo, kokushiwo kuphindelelwa kwakamuva kwe ukubaluleka idatha ngokwesimo! Siyohlala ngokwesimo futhi uboniswa noma ephrintiwe.
Ukuhlela kabusha: uzoqala kanjani? Kanjani ukuqala ukufunda uHlelo kusuka ekuqaleni Java?
Ukuxhumanisa langaphakathi Amakhasi: izikimu umhlabeleli
Udaba isikhathi: indlela ifomethi yesikhathi sosuku, futhi kuphi usuku essence
Coding html. Njengoba obudaywe ikhasi lewebhu
PHP (Regex) - kuyini? Izibonelo kanye kokuhlola izinkulumo njalo
Sambo amasu: eziyisisekelo, okungenxa yezimo ezikhethekile, angafi futhi kabuhlungu. Combat Sambo Wabasaqalayo
General. kanjani futhi kanjani hlomela them.
Ezigqokisa Decor: Ukusetshenziswa kwe rhinestones
Okufanele ukwenze uma ifoni yakho akaboni khadi?
Izimpawu umdlavuza kapopopo kwabesifazane. umdlavuza wamathumbu: izibalo
Walnuts Green. izindlela Ukwelashwa Folk
I-Russian emakethe futhi imoto ngaphandle sulfate
Amathiphu Simple: kanjani ukufakazela uthando ukuthi uyamthanda
Kungenzeka yini ukwenza i-ultrasound esesikhathini? izincomo
Amarekhodi ezibulungiweko ukuphathwa lenhlangano: GOST, imiyalelo, imibhalo, imithetho. Iziqondiso archival Amarekhodi Ukuphathwa